Nagu saabsan - TAIZHOU HEYA PLASTIC MOLD CO., LTD
HEYA MOLD - Ku takhasusay
Wasakhda caaga wasakhda
Waxaan leenahay koox xirfadlayaal ah R & D, waxaan horumarin doonnaa oo aan u habeyn doonaa caaryada caaga ah macaamiisheenna iyadoo loo eegayo baahidooda iyo baahiyahooda iyadoo lagu saleynayo in ka badan 10 sano oo waayo-aragnimo caaryo ah.
TW waxaan diirada saarnaa faahfaahin kasta oo ka baaraandegidda wasakhahaasi wax lagu durayo ee leh mashiinada wax soo saarka ugu horumarsan iyo qalabka baaritaanka, iyadoo macaamiisha siinaysa wasakhdo caag ah oo tayo sare leh.
Waxaan diirada saareynaa soo saarida badeecooyin caag ah oo tayo sare leh suuqyada warshadaha caagaga aduunka. Qaababkeena caaga ah waxay la jaan qaadayaan heerarka caalamiga ah.
Waxaan u qaadaneynaa habka ugu hooseeya ee mashruuc kasta. Macaamiishayadu waxay si isdaba joog ah u arkaan taraafikada korodhay, daacadnimada sumcadda kor loo qaaday iyo hoggaamiyeyaasha cusub mahadsanid shaqadayada.
XIRFAD LEH WAA AAN SAMEYNO, UU SOO SAARO IN AY DHAQAN YAHAY
Xirfad khibrad R & D waa dammaanad qaadka tayada wax soo saarka macaamiisha. Ku adkeyso hal-abuurnimada joogtada ah waa isha horumarka joogtada ah ee HEYA